စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအားလုံးအတွက် Google ကုမ္မဏီရဲ့ ” 8 innovation Principle” | မာသင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအားလုံးအတွက် Google ကုမ္မဏီရဲ့ ” 8 innovation Principle”
Google ကုမ္မဏီရဲ့ ” 8 innovation Principle”
ထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းများရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ထူးခြားတဲ့ စီးပွားရေးဒဿနတစ်ခုရှိပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာပဲကြည့်ကြည့် ၊ ပြည်ပမှာပဲဆိုဆို၊
ထူးခြားစွာအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းများရဲ့နောက်ကွယ်က တွန်းအားပေးနေတဲ့ ဒဿန တစ်ခု ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။
✔️Nike ဖိနပ်ကုမ္မဏီ ရဲ့ Just do it
✔️Apple အိုင်ဖုန်းကုမ္မဏီ ရဲ့ Think different
✔️L’Oréal Paris အလှကုန် ရဲ့ “Because You’re Worth It.”
✔️California Milk ကုမ္မဏီရဲ့ “Got Milk?”
✔️BMW ကားကုမ္မဏီရဲ့ “Designed for Driving Pleasure.”
✔️Tesco ကုမ္မဏီရဲ့ “Every Little Helps”
✔️Audi ကားကုမ္မဏီရဲ့ “Advancement Through Technology”
✔️McDonald’s ကုမ္မဏီရဲ့ “I’m Lovin’ It”
✔️Maybelline အလှကုန်ရဲ့”Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline.”
ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု ဆိုတာ ထက်၊ နောက်ကွယ်က ဒဿန ကို ရှာဖွေပါ။
ကိုယ့် လုပ်ငန်းကုမ္မဏီရဲ့ နောက်ကွယ်က ဒဿန တစ်ခု ကိုရှာဖွေဖို့အောက်ပါ google ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်စရာ စီးပွားရေး စည်းမျည်း (၈) ခု ကိုဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ရှိပြီးသား၊ စဉ်းစားပြီးသားဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေး ဒဿန ကို စာတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ချရေးခဲ့ပါ။
(ကိုယ့် မှာ ဒဿန တစ်ခု ရှိပြီးသား ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းမန့်ခဲ့ပါ)
၁။ ဘာလုပ်ငန်းလဲ ?
၂။ ဘာစီးပွားရေး ဒဿန လဲ ?
ကိုယ်သိတဲ့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်း တစ်ခု ရဲ့ ဒဿန ကို မန့်ခဲ့ကြပါ။